Kitra – «Chan 2021»: samy tafita avokoa ny RD Kongo sy i Kongo Brazzaville | NewsMada
Ekipa efatra ny efa nahazo ny tapakilany hiakarana amin’ny dingana ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina “Chan 2021”. Tafita amin’izany avokoa ireo Kongoley roa.
Ny Leopards-n’i RD Kongo, hifandona amin’ny Liona tsy voafolak’i Kameronina, mpampiantrano, ary ny Demony menan’i Kongo Brazzaville, hifampitana Voromaherin’i Mali. Ireo aloha ny fandaharan-dalaon’ny ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina “Chan 2021”.
Miavaka kely satria niara-tafita ireo Kongoley roa tamin’ity izay niray tao amin’ny vondrona B. Raha tsiahivina, teo amin’ny lalaom-bondrona farany, notanterahina ny alatsinainy lasa teo, lavon’ny RD Kongo, tamin’ny isa 2 no ho 1, i Niger, izay efa nangorom-damba. Na teo aza izany, sahirana ihany ny Kongoley satria mpilalao miisa 12 no tsy afaka niakatra kianja fa voatily ho nitondra ny tsimokaretina Covid-19, nialoha ny lalao. Nanana isa 7 ny Leopards, taorian’ny lalaom-bondrona, izay nametraka azy eo amin’ny lohany. Faharoa kosa ny Demony mena, nahazo isa 4, rehefa nandresy an’i Lybia, tamin’ny isa 1 no ho 0. Afa-bela izany ny Kongoley, tamin’ity. Raha tsiahivina mantsy, resin’i Lybia, teo amin’ny dingana ampahefa-dalana, ny Demony mena, nandritra ny “Chan 2018”.
Hotanterahina ao amin’ny kianja Ahmadou-Ahidjo ny fihaonana eo amin’i Mali sy i Kongo Brazzaville, ary ao amin’ny Complexe sportif de Japoma kosa ny fifandonan’i Kameronina sy ny RD Kongo. Lalao izay samy hatao ny asabotsy 30 janoary ho avy izao. Heverin’ny rehetra fa hiendrika famaranana, alohan’ny fotoana, ny fihaonana eo amin-dry zareo, mpampiantrano sy ny Leopards-n’ny RD Kongo.